Ukushaqeka ngokushona kowodumo lweGenerations | News24
Ukushaqeka ngokushona kowodumo lweGenerations
Cape Town - Ukushaqeka kudlula emhlabeni inkakha yomlingisi uTiki Jeffery Nxumalo obedlala indawo kaSompisi uyise kaMam Ruby kwiGenerations emzini wakhe oseLamont eningizimu yeTheku.
Izindaba zokudlula kwalo mlingisi ziqale ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana ekuseni ngoMsombuluko abantu bezwakalisa ukushaqeka ngokushona kwakhe ngokukhulu ukuzuma.
UNkk Nelisiwe MaMkhize Nxumalo oyilungu lo mndeni uchazele iNews 24 ukuthi uNxumalo uficwe umfana ahlala ekuveranda eseshonile ngoMsombuluko ekuseni.
“Siwumndeni sithintwe umfana obehlala egcekeni lakwakhe esitshela ukuthi sekwenzekeni.
OLUNYE UDABA: Usaqhubeka nokuzifaka otakwini umdlali wodumo
Sifice kunamakhambi abewadla esifuba (asthma) embhedeni wakhe.
Sicabanga ukuthi uvukwe yona njengoba kungenzeka ukuthi ubeseyofuna usizo ngesikhathi ewa phansi ezintatha zanamhlanje (ngoMsombuluko),” kusho uMaMkhize Nxumalo ogane umfowabo kalo mlingisi.
UTiki uzakhele udumo emdlalweni eyahlukene okubalwa eyeshashalazi nekamabonakude kanti uke waba nakwisikhangiso sakwaKFC.
UMaMkhize uthe umndeni usazohlangana mayelana namalungiselelo omngcwabo kodwa maningi amathuba okuthi angafihlwa ngoMgqibelo ozayo.